Sheeko ku saabsan Jeremy, Kaniisadda Caalamiga ah ee God Switzerland (WKG)
Markay ahayd 12 jir, Jeremy wuxuu ahaa fasalka labaad. Macallinkiisii, Doris Miller, ayaa inta badan quus ka joogay isaga. Wuxuu gadaal iyo gadaal ugu riixay kursikiisa, hoos u dhigida iyo qeylada codka. Mararka qaar wuxuu si cad u hadlayaa mar labaad, sidii haddii nal dhalaalaya uu galay gudcurka maskaxda. Inta badan, si kastaba ha noqotee, Jeremy wuxuu ku xanaaqay macallinkiisa. Maalin maalmaha ka mid ah waxay u wacday waalidkiis oo waxay waydiisteen inay dugsiga u yimaadaan kulan la-talin ah.
Markii Forresters ay aamusnaayeen iyagoo fadhiya fasalka fasalka madhan, Doris wuxuu ku yidhi iyaga: «Jeremy runtii waxay ka tirsan tahay dugsi gaar ah. Maaha wax cadaalad ah inuu la joogo carruurta kale ee aan lahayn dhibaatooyin waxbarasho. »
Ms. Forrester iyada oo aamusan ayay nafteeda ugu qaylisay markii ninkeedu yidhi, "Ms. Miller," wuxuu yidhi, waxay ku noqon doontaa argagax weyn Jeremy haddii aan ka saarno dugsiga. Waan ognahay inuu aad ugu faraxsan yahay halkaan.
Doris ayaa halkaas fadhiyey muddo dheer ka dib markay waalidku ka baxeen, iyagoo daaqada ka soo fiirinaya daaqadda. Ma ahayn cadaalad in lagu sii hayo fasalka fasalkeeda Jeremy. Waxay ahayd inay baraan 18 caruur ah Jeremyna wuxuu ahaa cilad. Isla markiiba waxay dareemeen dambi. Way tiri, Ilaahoow, halkan baan u barooranayaa, in kastoo dhibaatooyinkaygu aaney waxba ahayn marka loo eego qoyskan saboolka ah! Fadlan iga caawi samir badan Jeremy! »
Gu'gii ayaa yimid carruurtuna si xamaasad leh ayay uga wada hadleen wax ku saabsan Ciidaha soo socda. Doris waxay u sheegtay sheekada ciise iyo ka dib, si ay u xoojiso fikirka ah in nolosha cusubi ay soo baxday, waxay siisay cunug kasta ukumo balaastig ah. Waxay ku tidhi, Waa hagaag, waxaan rabaa inaad gurigaan gashid oo berrito ku soo celiso wax muujinaya nolol cusub. Ma fahantay? »
"Haa, Mrs. Miller!" carruurtu si xamaasad leh ayay ugu jawaabeen - qof kasta marka laga reebo Jeremy. Kaliya si taxaddar leh ayuu u dhagaystay, indhihiisu had iyo goor waxay ku hayaan wejigeeda. Way yaabtay haddii uu fahmay hawsha. Waxaa laga yaabaa inay wacdo waalidkeed oo ay u sharaxdo mashruuca.
Subaxii xigay 19 caruur ah ayaa iskuulka yimid, iyagoo qoslaya oo sheekooyin sheegaya, halka ukunta ay saaran yihiin dambiisha weyn ee miisaska miiska Miiska Miller. Kadib markay dhammeeyeen casharkii xisaabta, waxay ahayd waqtigii la furi lahaa ukunta.
Doris waxay heshay ubax ukunta koowaad. "Haa haa, ubax runti waa astaan ​​nolosha cusub," ayay tidhi. "Markii dhir ay ka soo baxaan dhulka, waxaan ognahay in guggu halkan joogo." Gabar yar oo safka hore taagan ayaa kor u taagtay gacmaheeda. "Tani waa ukunteyda, Mrs. Miller," ayay tiri.
Ukunta ku xigta waxaa ku jiray balanbaal caag ah oo u eg mid dhab ah. Doris ayaa arintaasi qabtay: "Dhamaanteen waan ognahay in siirku isu beddelo oo uu u koray dhir qurux badan. Haa, tani waa nolosha cusub ». Little Judy ayaa si qosol leh u qoslay wuxuuna yidhi, "Ms. Miller, kani waa ukunteyda."
Doris waxa ku xigay dhagax dhagax dusha laga saaray. Waxay sharraxday in moosku sidoo kale u matalo nolosha. Billy ayaa ka jawaabay safka dambe. "Aabahay ayaa i caawiyey," ayuu yiri. Kadib Doris wuxuu furay ukunta afaraad. Waxay ahayd madhan! Waxay ahayd Jeremy, ayay u maleeysay. Ma aha inuu fahmo tilmaamaha. Hadday iyada i illowday inay u wacdo waalidkiis. Iyadoon dooneynin inay ka xishooto, ayay aamusnaanta ka saartay ukunta meel kale oo ay u gaadhay mid kale.
Isla markiiba Jeremy ayaa hadlay. "Ms. Miller, ma dooneysaa inaad ka hadasho ukunkeyga?"
Doris si xushmad leh ayuu ugu jawaabay: "Laakiin Jeremy - ukuntaadu way madhan tahay!" Markaasuu indhihiisii ​​fiiriyey oo si tartiib ah u yidhi: "laakiin xabaashii Ciise way madhnayd!"
Waqtigu wuu istaagay. Markii ay mar kale qabsatay, Doris waxay weyddiisay: "Ma ogtahay sababta qabrigu u madhnaa?"
«Oh haa! Ciise waa la dilay oo la dhigay halkaas. Dabadeedna aabbihiis baa kiciyey! » Dawankii ayaa garaacay. Intii ay carruurtu ordayeen bannaanka dugsiga, Doris ayaa ooyay. Jeremy wuxuu dhintay seddex bilood ka dib. Kuwii isaga siiyey sharaftii u dambaysay ee xabaalaha waxay la yaabeen markay arkeen 19 ukun oo ku yaal naxashka, dhammaantoodna way maran yihiin.
Warka wanaagsan waa mid fudud - Ciise ayaa sara kacay! Jacaylkiisu ha idinka buuxiyo wakhtigaan lagu dabaal dego ruuxa.